Vaovao - fitandremana fametrahana ho an'ny fandriana hopitaly elektrika
Fandriana hopitaly Eletric
Fandriana fikarakarana trano
Orthopedics traction fandriana
Fitaovana fandriana hopitaly
Trolley firaketana ny marary
Trolley vy tsy misy fangarony
Fitaovana vy tsy misy vy
Trolley ilaina amin'ny ABS
Milentika fikosehana vy
Trolley famindrana marary
Trolley famindrana hydraulic
Trolley famindrana tanana
Fanaparitahana fiara mpamonjy voina
Fihodinana azo zahana
Vokatra fanampiana fanampiana voalohany
VAOVAO / BLOG
Fametrahana fitandremana ho an'ny fandriana hopitaly elektrika
1. Alohan'ny hampiasana ny fandriana ara-pahasalamana elektrika marobe, jereo aloha raha mifandray mafy ny tadin'ny herinaratra. Na azo antoka ny tariby mpanara-maso.
2. Ny tariby sy ny tadin'ny herinaratra an'ny actuator linear an'ny mpanara-maso dia tsy tokony hapetraka eo anelanelan'ny rohy fampakarana sy ny zorony ambony sy ambany mba hisorohana ny fanapahana tariby ary miteraka lozam-pifamoivoizana manokana.
3. Aorian'ny fananganana ny planina any aoriana, dia mihohoka amin'ny tontonana ny marary ary tsy mahazo manery.
4. Tsy afaka mijoro eo ambony fandriana ny olona ary mitsambikina. Rehefa atsangana ny tabilao dia tsy mahazo manery ny olona mipetraka eo amin'ny vodin-damosina ary mijoro eo amin'ny takelaka fandriana.
5. Rehefa vaky ny kodiarana ankapobeny dia tsy mahazo manosika na mihetsika fa afaka mihetsika ihany aorian'ny famoahana ny frein.
6. Tsy avela atositosika mitsivalana izy io mba hialana amin'ny fahasimban'ny fiambenana manainga.
7. Ny arabe tsy mitovy dia tsy azo ampiharina mba hisorohana ny fahasimban'ny kodiarana iraisan'ny fandriana ara-pahasalamana elektronika marobe.
8. Rehefa mampiasa ny maso, ny bokotra eo amin'ny tontonana fanaraha-maso dia azo tsindriana tsirairay fotsiny mba hamenoana ny hetsika. Tsy azo atao ny manindry bokotra mihoatra ny roa amin'ny fotoana iray hampiasana ny fandriana ara-pahasalamana elektronika marobe, mba hialana amin'ny tsy fetezana ary hanimba ny fiarovana ny marary.
9. Rehefa mila hafindra ilay fandriana ara-pahasalamana elektronika marobe, dia tokony esorina ny plug amin'ny herinaratra ary tsy maintsy ratra ny tsipika fanaraha-maso alohan'ny hatosika azy.
10. Rehefa mila hafindra ny fandriana ara-pahasalamana elektronika marobe, tokony hatsangana ny arofanina manainga mba tsy hianjera sy ho maratra mandritra ny fihetsehana. Rehefa mihetsika ny fandriana mandeha amin'ny herinaratra dia olona roa no tsy maintsy miasa miaraka aminy mba tsy ho voafehin'ny fibaikoana mandritra ny fizotry ny fampiharana, ka hiteraka fahasimbana amin'ireo singa mandrafitra sy hanimba ny fahasalaman'ny marary.
Fotoana fandefasana: Jan-26-2021
Sarety Trolley fitsaboana, Trolley fitsaboana miaraka amin'ny vatasarihana, Trolley mpitsabo mpanampy tsy misy tariby, Trolley hopitaly, Trolley Medical, Trolley laptop,